Ihe niile gbasara Trestolone Acetate (MENT)
1.Gịnị bụ Trestolone Acetate (MENT)? 2. Kedu ka Trestolone Acetate si arụ ọrụ?
3. Uzo nke Trestolone Acetate (MENT) 4.Trestolone Acetate (MENT) usoro
5.Trestolone Acetate (MENT) ọkara ndụ 6.Trestolone Acetate (MENT) okirikiri
7.Trestolone Acetate (MENT) rụpụtara 8.Trestolone Acetate (MENT) maka ịkpụ
9.Trestolone Acetate (MENT) maka bulking 10.Trestolone Acetate (MENT) uru
Nyocha nyocha nke 11.Trestolone Acetate (MENT) 12.Trestolone Acetate (MENT) ntụ ntụ maka ire
13.W ebe izu ịzụta Trestolone Acetate (MENT) ntụ ntụ
1.Gịnị bụ Trestolone Acetate (MENT)?
Trestolone Acetate (MENT) CAS 6157-87-5, nke a makwaara dị ka a7 alpha-methyl-nortestosterone (MENT ntụ ntụ) bụ steroid sịntetik siri ike nke nwere ike karịa testosterone. A na-eji steroid eme ihe maka ebumnuche na-ewuli elu yana maka ọzụzụ ike. Steroid a nwere ike iji ya maka usoro mgbochi nwoke. Steroid ahụ na-ebute amụghị nwa nwa oge n'ime ụmụ nwoke ma ọ bụrụ na enyere ya ọnụ ọgụgụ zuru ezu.
Trestolone Acetate (MENT) (6157-87-5) ekwenyere na ọ dị ike karịa okpukpu iri karịa testosterone, n'ihi nke a, ọ nwetala aha ọma ruo ọtụtụ afọ. A na-ahụ ya site n'ụzọ dị iche iche dịka ntụ ntụ ma ọ bụ ntụtụ. Nke a steroid bara uru na-agba mbọ lifters bodybuilders na-achọ na-enweta ezigbo nsonaazụ site na ijikọta steroid na nri nri usoro na Mmeju.
2. Kedu ka Trestolone Acetate si arụ ọrụ?
Trestolone Acetate (MENT) CAS 6157-87-5 na-enyere ndị na-ahụ maka anụ ahụ aka ịbawanye oke olu ma belata abụba n'otu oge. Iji rụpụta nsonaazụ kachasị mma, enwere ike ijikọ steroid na ndị ọzọ na - akwalite elu yana ịgbagide ma belata ahụ. Steroid ahụ na-akpata infertility nwa oge site na igbochi ntọhapụ gonadotropins na gland pituitary.
Steroid na egbochikwa mwepụta nke gonadotropins, homonụ na-akpali akpali follicle, na hormone luteinizing ọbụlagodi ntakịrị. Achọrọ hormone na-akpali akpali (FSH) na hormone nke Luteinizing (LH) na usoro nke spermatogenesis, usoro nke nwalere na-emepụta spermatozoa.
Mgbe egbochiri LH na FSH, spermatogenesis anaghị ewere ọnọdụ. Ibelata LH ozigbo na - egbochi mmepu nke nwoke na nwoke, o na - egbochi mbuzu nke testosterone, yabụ infertility. MENT ntụ ntụ bụ ọgwụgwọ ọgwụgwọ zuru oke maka ọtụtụ ọrụ na-adabere na androgen. Nyocha miri emi nke Superdrol (Methasterone) maka ahụ mmadụ
3. Uzo nke Trestolone Acetate (MENT)
N'adịghị ka steroid ndị ọzọ anabolic ji ụgwọ ndị amara aha ha na ndị na-ere ahịa ojii ma ọ bụ karịa ụlọ ọrụ mgbakwunye counter, Trestolone Acetate sitere na ọgwụ ike, nyocha sayensị na-eme ka ọ bụrụ ihe a ma ama n'etiti ndị obodo na-ewuli elu. Emere MENT na 1960s
N’oge na-adịbeghị anya, Schering, ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ na-ahụ maka nyocha na Population Council azụlitewo mmasị n’ịwapụta steroid a mgbe ha nyochachara n’ime steroid a maka ebumnuche ọgwụgwọ nwoke na-eme ka ọmụmụ nwoke na-anọchi ya. Companieslọ ọrụ ndị a achọpụtala ụdị dị iche iche dị na steroid dị mma maka iwughari ahụ. Na mgbakwunye, steroid a bara uru n'ọtụtụ ọgwụ nnọchi androgen.
Ndị ọzọ karịa ọgwụgwọ mgbochi androgen ọgwụ na mgbochi ntụgharị, dịka nkwadebe intramuscular ma ọ bụ dịka transdermal, enwere Trestolone Acetate ndị ọzọ (EGO) ihe gụnyere gụnyere na hypogonadism bụ isi, isi nkwọcha, mfu nke oke ọkpụkpụ, ọrịa cancer, ọrịa testicular, BHP, ASIH, sarcopenia, cachexia na mmebi akwara yana nkwalite egwuregwu na ụlọ ahụ.
4.Trestolone Acetate (MENT) usoro
Ebe ọ bụ na erebeghị azụmahịa dị ka ọgwụ, Mke akọwapụtaghị ya Trestolone Acetate (MENT) usoro ọgwụ ntuziaka maka steroid. Abụ steroid dị ike nke ukwuu, obere dos ga-adị irè maka ndị na-ahụ maka ahụ. Studiesfọdụ nnyocha gosipụtara na ọgwụ ahụ ji okpukpu iri karịa ike karịa testosterone ma gbochie spermatogenesis okpukpu abụọ karịa nke testosterone.
N'ihi ya, usoro ọgwụgwọ dị n'okpuru 10mg (nke a na-ejikarị 3-16mg) kwa ụbọchị ga-adị irè maka ihe mbido. Enwere ike iwere ọgwụ ndị siri na ọgwụ a na 10-20mg na oge nke ụbọchị abụọ ruo atọ. Peoplefọdụ ndị nwere ike ịtụle usoro onyunyo nke ihe karịrị 10mg kwa ụbọchị maka nsonaazụ Trestolone Acetate (MENT) ebe ọ bụ na arụmọrụ ọgwụ abụghị otu maka mmadụ niile.
Ndi mmadu di iche iche nwere mmetuta banyere ikike na ogwu estrogenic nke ogwu. Agaghị atụ aro ị Highụ ọgwụ mgbochi dị elu n'ihi na ha nwere ike ibute nsonaazụ dị oke njọ.
Ndị ọrụ nwere ahụmahụ nke Trestlone nwere ike iji dosins nke 20-50mg kwa ụbọchị. Agbanyeghị, nke a nwere ike ịdị iche dabere n'ụdị eji etinye ya. Dịka ọmụmaatụ, ụdị inject nwere ike ịdịtụ ala karịa ụdị transdermal na ụdị ọnụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, agbanyeghị ọgwụ a; injections na transdermal agbanwe na-atụ aro ka ụzọ kachasị mma iji toụọ ọgwụ a. Iji belata nsonaazụ estrogen na prolactin na-emetụta ya, ọ dị mma iji steroid nwere prolactin inhibitors dị ka Cabergoline na inhibitor aromatase dị ka Arimidex.
Usersfọdụ ndị ọrụ nwere ahụike nwere ike were usoro onunu ogwu nke 50-75mg kwa ụbọchị maka okirikiri nke izu 4. Ndị ọrụ a kwesịrị kewaa usoro onyonyo ahụ ụzọ abụọ, ya bụ, otu tupu ha ehi ụra na onye ọzọ mgbe ha teta. Ndi okacha mara nwere ike were onunu ogwu ihe ruru 75-100mg. Enwere ike kewaa usoro ọgwụgwọ ahụ ụzọ atọ, dịka e gosiri n'okpuru:
Mgbatị ahụ tupu - 25-50mg
Tupu ụra ma ọ bụ n'abalị- 25mg
Necessaryzọ zuru oke dị mkpa mgbe ị na-anwale ọgwụ Trestolone Acetate yana maka nsonaazụ dị mma. Otu, ya mere, kwesiri ijigide ezigbo nri maka iwepu abụba ma gbakwunye akwara. Ọ dị mkpa iji nwee usoro mmega ahụ dị mma yana yana ojiji na-agbanwe agbanwe nke na-eso nsonaazu usoro onunu ogwu ka ọ rụpụta ihe dị mma ma belata nsonaazụ.
5.Trestolone Acetate (MENT) ọkara ndụ
Ndụ nke steroid na-ezo aka n'oge ahụ mmadụ toụrụ ọgwụ iji wepụ ọgwụ ahụ wee kpochapụ ihe dị ka ọkara nke ego ahụ. Trestolone Acetate ọkara nke ndụ sitere na awa asatọ ruo elekere iri na abụọ (awa 8-12).
N’ihi nke a, mmadụ nwere ike ị theụ ọgwụ ahụ n’obere onyonyo ụbọchị niile, nke na-ahụ na ọ ka n’iru ọbara. Enwere ike ị were ọgwụ ndị a ụzọ abụọ ruo atọ n'otu ụbọchị. N'ihi ịdị iche iche nke ọgwụ na ọbara, ọ dị mkpa na ndị ọrụ nwere ike ịgbakọ ọkara ndụ ọgwụ ahụ. Nke a ga - enyere onye ọrụ aka ị takingụ ọgwụ ahụ na usoro oge.
Ọ bụrụ dịka ọmụmaatụ, mmadụ kpebiri iwere 50mg kwa ụbọchị, na usoro nke izu anọ, yana n'okpuru echiche ahụ na ọgwụ nwere ọkara ndụ nke 8hours, ọdịiche ịta ahụ na ọbara nwere ike ịdị ka ndị a:
N'ime usoro ọgwụgwọ a, otu onye nwere ike ị theụ ọgwụ ahụ na nkeji 8-hour nke 25mg nke ọ bụla. Ọ bụrụ na usoro onunu ogwu bidoro na 6 AM, ntinye uche ga-abụ 12.5mg mgbe elekere 8 (2 PM) mgbe ewere nke usoro nke abụọ. Usoro ogwu nke abuo nwere 25mg, nke ga-ewulite ntinye uche gaa na 37.5mg.
Afọ asatọ ka usoro ọgwụgwọ nke abụọ gasịrị (10 PM), ntinye uche ga-abụ 18.75mg. Oge awa asatọ, emesịa, ọ ga-abụ 6 AM nke ụbọchị na-esote, mgbe a ga-ewere ọgwụ mbụ maka ụbọchị ahụ. Nke a pụtara na a ga-eme usoro ọgwụgwọ mbụ nke ụbọchị nke abụọ mgbe anụ ahụ nwere mkpokọta ihe dịka 9.4mg site na ụbọchị gara aga.
Suchkpụrụ dị otú a na-eme ka nchedo steroid dị n'ọbara tupu mgbatị ahụ na mgbe ọ gachara. Knowingmara otu esi gbakọọ ọkara ndụ Trestolone Acetate (MENT) nke ọgwụ ahụ na-enyere ndị ọrụ aka ijide n'aka na mmachi nke ọgwụ ahụ bụ naanị elu n'oge oge dị oke egwu, nke dị tupu, n'oge yana mgbe mgbatị ahụ gasịrị. Ngụkọta ziri ezi nke ọkara ndụ Trestolone Acetate (MENT) na-enyere onye ọrụ aka ijikwa usoro ọgwụgwọ ma nweta nsonaazụ bara uru.
6.Trestolone Acetate (MENT) okirikiri
Ndị dị iche iche nwere ike iji usoro dị iche iche mee ihe ma a bịa n’ị takingụ Trestolone Acetate. Nke a ga - abụkarị na ahụmahụ mmadụ nwere ọgwụ ahụ. Mmadu kwesiri ighota nsogbu oyuyo ha di n’ime ha, dabere n’ebum n’uche ha na ebum n’uche ha tupu emee okirikiri obula.
You banye n ’okirikiri, ọ dị mkpa ịtụle ogologo oge okirikiri yana itinye ọgwụ n’obara n’ime okirikiri ahụ. N'inwe ebumnuche siri ike, ọ dị mfe ịhọrọ nke dabara adaba Trestolone Acetate (MENT) okirikiri na-enyefe. Site na Trestolone Acetate, enwere ike ịnweta nsonaazụ dị mkpa ọbụlagodi okirikiri nke izu abụọ. Agbanyeghị, usoro kwesịrị ekwesị kwesịrị ịgba ọsọ maka izu anọ ma ọ bụ isii. Nke a bụ ezigbo usoro maka ọ na - egbochi mmadụ ibugharị ọgwụ ha.
7.Trestolone Acetate (MENT) rụpụtara
Trestolone Acetate bụ steroid dị ike nke nwetaworo ewu ewu maka mmetụta dị ike ya. Otu njirimara, ihe kpatara ọtụtụ mmadụ ji atụle steroid a, bụ n'ihi nsonaazụ ya dị mma a rụzuru n'ime obere oge. Ọgwụ nwere nsonaazụ dị ike maka ndị na-achọ inweta nkwalite ike ngwa ngwa.
Ndị mbido iji ọgwụ a nwere ike nweta nsonaazụ ndị pụtara ìhè ọbụladị obere ka izu abụọ na-enweghị edobe. Maka ikike dị elu ya, ndị ọrụ nwere ike nweta uru ahụ na-enweghị atụ na nsonaazụ dị arọ ọbụna na obere usoro nke 3-6mg. Nsonaazụ uru ahụ na-adị ogologo oge, nke na-eme ka ndị egwuregwu na ndị na-ebuli ibu dị elu na-atụle ọgwụ a.
Nkịtị ndị na-abụghị bodybuilders nwekwara ike iji ọgwụ a iji nweta mma mma. Enwere ike ịkwalite nsonaazụ ndị a site na ịnọgide na-enwe usoro mmega ahụ dị mma na iri nri kwesịrị ekwesị. Ọgwụ na-enye ndị ọrụ ike karịa maka mmega ahụ, nke chọrọ agụụ dị elu.
Ike nke Trestolone Acetate ntụ ntụ igbochi mwepụta nke steroid iji chịkwaa usoro spermatogenesis na-eme ka ọgwụ ahụ baa uru maka usoro ịmụ nwa maka ahụike maka ụmụ nwoke.
8.Trestolone Acetate (MENT) maka ịkpụ
Trestolone Acetate na-enye ọgwụ bara uru maka ndị nwere mmasị ịkpụ. Mbelata Trestolone Acetate (MENT) na-enyere ndị na-ebuli ibu na ndị na-ahụ ahụ ike iwelata abụba dị ukwuu n'ahụ ha na-enweghị oke nrụgide na akwara ha. Iji mezuo okpukpo aru nke physique di elu, enwere ike iji Trestolone Acetate ya na ogwu ndi ozo kwalite nsonaazụ ya na Trestolone Acetate (MENT) dabere na nsonaazụ achoro ya na ntinye uche nke mmadu na akwara.
Kpụcha usoro Trestolone, mmadụ nwere ike izo Winstrol na androgens ndị na-adịghị mma n'anya dịka Halotestin ma ọ bụ trenbolone. Njikọ dị otú ahụ ga-enyere mmadụ aka inweta nkọwa siri ike banyere ahụ na oke ọrụ nke ọtụtụ ndị na-ahụ maka ahụ na-achọ inweta. Ndị nwere ọgụgụ isi dị elu nwere ike ịtụle ịtinye ọgwụ ndị dị ka Deca-Durabolin, Equipoise ma ọ bụ primobalin mgbe ị na-ebu Trestolone acetate.
9.Trestolone Acetate (MENT) maka bulking
Trestolone nwere ike jikwa ya na steroid ndị ọzọ maka bulking. Trestolone Acetate (MENT) ntụ ọka a na-ezubere ndị mmadụ na-achọ inwe uru uru ahụ bara, na-enwe ọzụzụ na arụ ọrụ na arụ ọrụ mgbe niile. Ọ kachasị, mgbalị iji belata abụba anụ ahụ nwere ike iduga ịkọ ndị nkuzi nke nwere ike ibute nwepu olu. Trestolone, mgbe ejikọtara ya na steroid ndị kwesịrị ekwesị, nwere ike ime ka ọ dịrị mmadụ mfe ida abụba anụ ahụ, na-elekọta ma na-eme ka uru ahụ dịkwuo elu ma mee ka ahụ nwee ike na ume iji na-atachikwu anya na mmega ahụ siri ike.
Oge ụfọdụ, ichu iwe nwere ike ịbụ ihe ngbu siri ike nye ndị na-achọ ibute nsonaazụ ngwa ngwa. Udiri usoro a nwere ike inye onye ọrụ ohere ego kachasị, nke gụnyere njigide mmiri. Nsonaazụ ndị a nwere ike ịdị, agaghị adịte aka. Offọdụ steroid ndị enwere ike itinye ya na Trestolone Acetate (MENT) maka usoro bulking gụnyere Dianabol, Anadrol, na Trenbolone.
Dianabol bụ otu n'ime steroid nke a na-elebara anya nke ọma maka bulking maka ike ya ime ihe ozugbo ma na-enye ntinye ngwa ngwa n'ime obere oge. Strest Trestolone na Dianabol nwere ike ibute ihe ruru 20 paụnd nke oke olu n'ime izu 6. Dianabol bara uru n'ihi na o nwere denser na nnukwu ọha na-enweghị injections.
A na-eji Deca-Durabolin, nke a makwaara dị ka Nandrolone, na-emegbu ndị mmadụ na-achọ ọgwụgwọ ngwa ngwa na mgbake akwara. Ọ bakwara uru maka usoro ọgwụgwọ usoro mgbatị maka na ọ na-eme ka ike gwụ ike. Steroid a nwere obere nsonaazụ yana enwere ike iji ya na steroid androgenic dịka Dianabol.
Trenbolone nwere ikike na-erughị eru ma nwekwaa ya, a na-ejikwa ya maka okpo anụ ahụ maka ịkpụ ahụ. Ọ bụ ezie na o nwere ume dị elu, ọ nwere ike ọ gaghị aba uru maka ndị na-ebu ibu dị arọ na-akwado maka asọmpi. Ọ nwere ike, Otú ọ dị, nwere ike igbochi ọ bụla bulking okirikiri.
10.Trestolone Acetate (MENT) uru
Trestolone acetate pụtara na ahịa ahụ n'ihi ike ya nke ndị nyocha ọgwụ kwenyesiri ike na amaara ya maka ịdị ike ya. Trestolone acetate nwere ọtụtụ uru dị iche iche, ọkachasị ndị mmadụ na-achọ imezu ahụ ha ma mezuo ebumnuche ha. Ọ bụ ihe kachasị akwadoro maka inye aka na uru akwara yana maka oke ibu. The steroid na-enye ndị ọrụ ya ohere inweta ihe na-eme ka ọ bụrụ ara ma sie ike. Offọdụ n'ime elu Trestolone Acetate (MENT) bara uru metụtara Trestolone acetate gunyere:
Has Trestolone acetate amarala na ọ na-arụ ọrụ ọsọ ọsọ karịa steroid ndị ọzọ. Trestolone acetate na-eweta nsonaazụ ozugbo mgbe ịgba ama. Ndị ọrụ ahụ akọpụtala mgbanwe dị ịrịba ama na akwara anụ ahụ mgbe ha theụsịrị ọgwụ ahụ. N'ụzọ dị ịtụnanya, nsonaazụ ya bụ ogologo oge, na ndị ọrụ anaghị echegbu onwe ha banyere ịmaliteghachi onwe ha ịgbanye akwara ha. Ọgwụ ahụ na-anapụta utịpị myotopic nke testosterone nke na-eme ka ọ nwekwuo ọnụego ya nke iwuli akwara dị elu karịa steroid ndị ọzọ n'ahịa.
Enwere ike iji Trestolone acetate dị ka ọgwụ ọzọ maka igbutu ya na ike ya ịme mkpụ ahụ na-emewanye nke ọma. Ogwu ahu nwere ihe ndi puru iche dika ijikwa prohormon ndi ozo nke n’enye aka n’ime ka okpueze belata ya, si otua na aru oru nke onye n’acho iwepu akwara ma gwakwa abuba oku.
· Trestolone acetate achoputala bara uru na ihe eji egbu egbu. Ọgwụ ndị ahụ na-eme ka onye ọrụ ya nwee oke njigide nitrogen nke na-enyere ha aka ịkwalite usoro nke akwara. Ọgwụ na-emekwa ka ahụ ndị na-ahụ maka ahụ nọgide na-enwe steeti anabolic nke anụ ahụ.Ihe Nduzi kachasị na Nolvadex iji agwọ ọrịa kansa
Iji Trestolone acetate na-eme ka ahụ mmadụ nwekwuo protein. N'ihi ya, ọgwụ na-enye akwara akwara ngwa ngwa ebe ọ bụ na protein na-arụ ọrụ dị ka ihe mgbochi nke ahụ.
Ọgwụ na-akwalite ogo ike. Levelbawanye ike dị elu na-enyere ndị ọrụ aka ịzụlite ike nke ọzụzụ siri ike na ogologo. Ọzọkwa, iwelie ọkwa dị ike na-enyere bodybuilders ike ime ka ezumike ha dị mkpụmkpụ, si otú a na-enyere ha aka ịrụ ọrụ mgbe niile.
Adịghị ka ọgwụ ndị ọzọ trestolone Acetate agbanweghi ka estrogen. Estrogen nwere ihe ndi mmadu na - emebi, aru ike, na - ebute oke erughi ala, oke ike na oke olu. Ka osi di, MENT buuru ihe ndi mmadu n’eme ka ndi mmadu mee ka ha chekwaa ogwugwu utrogen.
· Ọzọkwa, n'adịghị ka ọtụtụ steroid, ọgwụ anaghị agbanwegharị na DHT. Ọzọkwa, steroid amụbawo ikike dị ka ọ na-ejikọghị ya na njikọ nwoke na nwanyị nwere njikọ nwoke na nwanyị globulin (SHBG).
11. Trestolone Acetate (MENT) nyocha
Trestolone Acetate ka amarala dị ka steroid anabolic dị ike ma dị irè. Ọtụtụ ndị mmadụ ejirila ọgwụ Trestolone Acetate rụọ ụlọ na-ewu ahụ ọgwụ maka akwara ike yana ebumnuche ọgwụ. Ndị dị otú ahụ egosipụtawo afọ ojuju ọgwụ ahụ site na nyocha ndị ahịa ha dị mma. Ihe ndị a bụ ụfọdụ nyocha ọrụ nke ndị ọrụ dị otú a dere:
Nick bu ihe owuwu ihe dika 27, obu onye oru ugbo nke Trestolone ugha maka ahu. Nick ejirila ngwaahịa a mee ọnwa asatọ, ọ nwekwara obi ụtọ na nsonaazụ ya. O kwuru na ọgwụ ahụ enyela ya nsonaazụ dịka ọ chọrọ. Nick gara n'ihu na-enweta oke akwara dị egwu na-enweghị mmetụta ọ bụla. Obi dị ya ụtọ na ọgwụ ahụ enyeghị ya agụụ, agụụ ịgbanwe. Naanị nsogbu Nick nwere na steroid a bụ ọsụsọ abalị na ụfọdụ ura. N'ịbụ onye bụbu onye agha na-ewu ewu, Nick ji akụkụ ndị a ma ọ hụghị na ha na-emesi ya ike.
Greg bụ onye ọrụ obi ụtọ ọzọ nke Trestolone maka ịrụzi ahụ. Greg ji ọgwụ a, ọ na-agafe ọkara nke abụọ ya mgbe ọ gbasasịrị ọgwụ okirikiri. N'ime usoro nke abụọ ya, ọ nọ na-achọ ego, yana nsonaazụ ya dị oke mma. Greg na-ezube ịmalite ịkpụcha ozugbo o mechara okirikiri a. Greg kwuru na ọ bụ onye na-atụ ụjọ na mbido ya ma na-atụ egwu na ọgwụ ahụ ga-enwe mmetụta dị ize ndụ na ahụ ya. O juru ya anya na ọgwụ aghọọla otu n’ime steroid kacha mma o jirila. Ọgwụ ahụ enyerela ya nnukwu ike, ahụike ọfụma, ma meekwala ya aka ịrụ nnukwu akwara. Greg dị mpako maka ọgwụ ahụ wee sị na ọ ga-akwado ya maka onye ọ bụla.
Clinton nwere mmetụta na-akpali ịkọrọ ahụmịhe ya na Trestolone Acetate maka ọmarịcha nsonaazụ ọ rụpụtara n’ime obere oge na obere usoro ọgwụ a. Clinton abụghị onye na-ebuli ihe dị arọ ma ọ bụ onye na-ewu ụlọ kama ọ bụ onye mmebe ejiji nke nwere oke agụụ maka ahụ ike ya na ahụ ya. Ọ mụtala ọgwụ a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ, ọ soụrịrị ọ thatụ na ihe ndị ọzọ karịa ị nweta akwara anụ ahụ na ahụ siri ike, ọgwụ ahụ nyekwaara ya aka inwe ahụ ọ liụ libido, ahụike, yana anụ dị mma. Ọgwụ ahụ nyekwaara ya aka ibelata abụba anụ ahụ, nke na-eme ya obi ụtọ. Clinton ebido n’iru iji ogwu a n’ihi na o nwebeghi nsogbu ya.
12.Trestolone Acetate (MENT) ntụ ntụ maka ire
Ndị na-emepụta Trestolone Acetate agbaala mbọ hụ na ngwaahịa a nwere oke mma. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ndị mmadụ n'ahịa ojii na ala ụlọ na-ere ngwaahịa dị ala na ọnụahịa dị ala. Nweta Trestolone Acetate dị obere nwere ike ibute nsonaazụ ndị ọzọ dịka ọnya prostate. Ya mere, ndị na-azụ ahịa na ndị ahịa nke ngwaahịa a kwesịrị ịkpachara anya mgbe ha na-azụ Trestolone Acetate (MENT) ntụ ntụ maka ire.
N'ihi aha ya na mmụba nke ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ ji akpọrọ ihe ma chọọ inweta ahụike, enwere ike inweta ọgwụ ahụ n'ọtụtụ ebe. Uru otu ọgwụ a siri dị bụ na ọ dị ka ọnụ ahịa ọfụma karịa steroid ndị ọzọ. Maka ndị na-azụ ahịa na-achọ ịzụta ntụ ntụ n'ọtụtụ na-enweta ngwaahịa ahụ na ọnụahịa dị ala. A na-ere ngwaahịa ahụ na nsụgharị abụọ, ya bụ mmanụ a gwakọtara na mbụ nke 100mg / ml yana ntụ ntụ Trestolone Acetate ntụ ntụ.
13. Ebe ị ga-azụta Trestolone Acetate (MENT) ntụ ntụ
Trestolone Acetate dị na ndị na-ere ahịa mba ofesi enwere ike inweta n'ọtụtụ ọnọdụ ụwa niile dịka China, United States, Canada, Brazil, na Mexico. Ndi ahia ahia nke mba a emeela ka ọgwụ a dị na weebụsaịtị ha ka ndị zụrụ ya nwee ike zụta ya na nyiwe ha.
Ọzọkwa, ị nwekwara ike ịzụta Trestolone Acetate (MENT) ntụ ntụ site na saịtị ndị ọzọ dị n'ịntanetị na ọnụ ahịa fairer, Otu nwekwara ike ịzụta Trestolone Acetate (MENT) na ndị ahịa site na mpaghara mana ị dọrọ gị aka na ntị maka ịlele ogo mgbe ị na-azụ ngwaahịa dị na mpaghara ka ndị adịgboroja jujuola ahịa. A na-achọkarị ịzụta ndị ahịa ka ha zụta ngwaahịa ahụ na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ guzobere kama isi mmalite ndị ọzọ n'ịntanetị, na Trestolone Acetate (MENT) na-eweta iji hụ na ha nwetara ngwaahịa dị mma.
Trestolone enwetawo aha dị oke mkpa na ahụike na ebumnuche ndị ọzọ dị ka ọgwụ mgbochi nwoke. Ọgwụ a bụ steroid kachasị nwee ike na ahịa ahụ na-ewu ewu n'ihi ya. Ọgwụ a nwere ọtụtụ uru nye ndị ọrụ, yana ọ bara uru nke ukwuu. Ndị na-a ofụ ọgwụ a kwesịrị ịhazi oge usoro ọgwụgwọ ha, mgbako ọkara ndụ, yana ijikwa mmega ahụ mgbe niile yana nri kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụta Trestolone maka nrụpụta ahụ, ị ​​nwere ike ịga websaịtị buyaas.com iji tinye iwu gị ma jụọ maka ozi ndị ọzọ.
1. Drake Ellen, Drake Randy; Okwu Saunders Saunders, (2006) p.682
2. Elik; Nkọwa nke Ọgwụ; Data Kemịkal: Chemical Chemical, Structures, na bibliography. (2014) p.538, 588
3. Legato Marianne; Cipleskpụrụ nke Medicinement of Specific Medicine, (2009) p.363
4. Yalkowsky Samuel, He Yan, Jain Parijat; Akwụkwọ ntuziaka nke ubdị Ọrụ Ngwọta Aqueous, (2016) P. 1567
5. Zayas Hilda; Nkọwapụta nke Chemical Chemical & ọgwụ, (2005). P. 268